Console tafura Vagadziri & Vatengesi - China Console tafura fekitori
Girazi Console Tafura yeGirazi Fenicha
yakajeka crystal girazi tafura tafura ndiyo nzira kwayo yekugadzira elegancee mune chero space.Order yako yegirazi yepamusoro kune yako girazi tafura yekudyira, girazi tafura yekofi, girazi tafura tafura, girazi patio tafura kana girazi rako repamusoro tafura. Tsika-yakagadzirwa zvakare gadzira yako nzvimbo runako uye yakasarudzika.
Luxury Girazi yepamusoro Metal Console Tafura
Luxury Glass Top Metal Console Tafura ndiyo chaiyo nzira yekugadzira elegancee mune chero nzvimbo.Order yako yegirazi yepamusoro kune yako girazi tafura yekudyira, girazi tafura yegirazi, girazi console tafura, girazi patio tafura kana girazi rako repamusoro tafura. Tsika-yakagadzirwa zvakare gadzira yako nzvimbo runako uye yakasarudzika.
Yemazuva ano uye Yakasarudzika Metal Console Tafura yeGirazi Pamusoro
Fusion Girazi rakagadzirwa nezvikamu zvakawanda zvegirazi rakajeka rakabatanidzwa pamwechete muchoto kuti riite kutaridzika kwakasarudzika. Iyo yakaderera simbi yezvinhu mugirazi inoipa iyo yakajeka bhuruu hue, inoyeuchidza neruvara rwegirazi glacial. Rutivi rwepazasi rine hunyoro hushoma hwemota hunopedzisa huni bhuruu yegirazi. Fusion Girazi inowanikwa mune dzimwe tsika saizi.
Wholesale Crystal Console Tafura
yakajeka crystal girazi tafura tafura ndiyo nzira kwayo yekugadzira elegancee mune chero space.Order yako yegirazi yepamusoro kune yako girazi tafura yekudyira, girazi tafura yekofi, girazi tafura tafura, girazi patio tafura kana girazi rako repamusoro tafura. Tsika-yakagadzirwa zvakare gadzira yako nzvimbo runako uye yakasarudzika
a) Ukobvu: 20mm-40mm
b) Max saizi: 3300X320mm, Min saizi: 180x300mm
c) Ruvara: Low-simbi
d) Edge: Flat kumucheto, kukuya kumucheto, yakanaka yakabwinyiswa kumucheto uye vamwe.
e) Kona: yakasikwa kona, yekugaya kona, yakatenderera kona ine yakanaka yakabwinyiswa.
f) Maburi: Basa rekuboora rinowanikwa pane sarudzo yemutengi.
Fusion girazi kunyaradza tafura
Transparent Crystal Girazi Console tafura